Apple ichasiya mutero mainjiniya kunzvenga mutero | IPhone nhau
Zviitiko muIreland zvaenda kupfuura zvinopfuura izvo kambani yehunyanzvi inogona kutoraMune zvematongerwo enyika, avo vakapa ruoko kukambani yeCupertino kuti ivhure miganhu yeEurope nemutengo wakaderera ikozvino vari kutambura nenjodzi dzinowanzoitika munharaunda yenzvimbo dzisingatenderi maitiro aya.
Muvhuro wapfuura Apple CEO VaTim Cook vakasangana nemutungamiri weFrance, E. Macron, nechinangwa chekujekesa nzira iyo Apple inobhadhara nayo zvigadzirwa zvefemu yake inotengeswa muFrance, pamwe neyakaomarara matanho ekudzivirira ayo France iri kumisikidza kune avo vanovavarira kuita skimp pavanobhadhara mutero munyika yeGallic.
Sekureva kwehofisi yekuFrance yekudhinda, vese vatambi havana kutaura nezvenyaya iyi, asi vakajekesa kuti Tim Cook anofanira kutora mutemo wekubhadhara mutero kwaari kuwana purofiti. Uye ndezvekuti kunyangwe iyo CEC ichibvumidza kufamba kwemahara, chokwadi ndechekuti gare gare Apple ine mitengo yakasiyana mune yega yenyika painopa zvigadzirwa zvayo, chimwe chinhu chingangoita chisina musoro. Zviripachena kuti iyo Cupertino kambani inotsvaga kuwana zvakanyanya kubva muhupfumi hwayo, uye nekuda kweizvi yakashandisa mutero unonzwisisika weIreland yavakapa.
Zvinotaridza kuti Apple inotanga kufunga kuti kuramba uchiita zviitwa izvi hazvigoneke, uye kuti mukufamba kwenguva nekubhadhariswa faindi vanopedzisira varasikirwa nemari yakawanda kupfuura yavanochengeta kusvika pamuganhu wezviri pamutemo. Nechikonzero ichi, uye sekureva kwaBloomberg, iyo Cupertino kambani iri kutanga kuunganidza timu yayo yezvemari nechinangwa chekugadzirisa zvishoma nezvishoma kune imwe neimwe yenyika dzainopa zvigadzirwa zvayo, kuitira kuyedza kubhadhara mitero inoenderana munyika idzi, zvichikanganisa mutengi zvishoma sezvinobvira. Zvese zvinoramba zvichionekwa, asi ndiro danho rekutanga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple ichasiya mutero mainjiniya kunzvenga mutero
Ini ndinofunga ichi chisarudzo chakanaka naApple, nekuti ichokwadi kuti nekubhadhara faindi ivo vari kurasikirwa zvakanyanya kupfuura izvo zvavanoedza kunzvenga.
Kana mutsetse "uchisiya mari yeinjiniya kunzvenga mutero" zvinoreva kuti Apple yaizorega kushandisa sisitimu kuti irambe iri mugwara, asi kana iri iyo inopesana ingori kutsoropodza munyama, amai vangu, aya mazai ekuti " Ini handibhadhare mutero, saka chii? "
Zvinosemesa sei Apple uye ndiani anoitsigira kana iri yechipiri mamiriro
Chinhu chakanyanya kushata hachisi chekuti Apple iri kuita izvi (izvo zvakare chiri chokwadi!), Chinhu chakanyanya kushata ndechekuti kune mazana emakambani anoshandisa hunyengeri hwakafanana uye haataurwe nezvawo. Uye kwete muIreland chete, Luxembourg yakanyanya kufanana.
Kuti Apple inomira kuzviita (kana chiri chokwadi) yakanaka asi mhinduro chete ndeyekubvumidza chiyero cheEuropean chekufambisa kwezvinhu pakati pesangano rekambani imwe chete mudunhu reEU.
Chero chipi zvacho chimwe chigamba chisingarwisane nedambudziko remidzi.
64% yevaAmerica vane chigadzirwa cheApple